Dejan Lovern Oo Su'aal Khuraafaad Ah Waydiiyay Mohamed Salah Iyo Falcelintii Taageerayaashu Bixiyeen. - Gool24.Net
Dejan Lovern Oo Su’aal Khuraafaad Ah Waydiiyay Mohamed Salah Iyo Falcelintii Taageerayaashu Bixiyeen.
Mohamed Salah iyo Dejan Lovern ayaa ah kuwo ay saaxiibtinimo iyo kaftan u dhexeeyo waxaana marar badan la soo arkay labadan xidig oo waxyaabo badan isla soo maray.
Dejan Lovern ayaa su’aal khuraafaad ah waxa uu waydiiyay Mohamed Salah inkasta oo uu xidiga reer Masar uu yahay mid muslim ah oo aan waxyaabaha khuraafaadka ah aaminsanayn.
Su’aasha khuraafadka ah ee uu Lovern waydiiyay Mohamed Salah waxaa ka dhalatay falcelin badan iyada oo ay qaar ka mid ah dadkii ka qayb qaatay ay u sheegeen in uu Lovern xanuunsan doono isaga oo markiiba sheegay in uu isagu ka badqabo xanuunka farayska karoonaha.
Dejan Lovern ayaa Mohamed Salah u soo qoray su’aal uu ku waydiiyay in ay nasiib wanaagsan tahay haddii ay shimiri ku dul xaarto isaga ama shay uu leeyahay balse waxa uu xusay haddii laba nasiib ay noqonayso haddii ay shinbiri jabiso daaqadiisa.
Waxaa jirta sheeko khuraafaad ah oo aduunka ku baahday isla markaana ay xataa dad Soomaali ahi aaminsan yihiin in qofka oo geed hoos fadhiya haddii ay shinbiri ku soo xaarto ay nasiib iyo aduunyo uu helayo muujinayso inkasta oo ay islaam ahaan tahay wax aan sal iyo raadtoona lahayn.
Dejan Lovern ayaa Mohamed Salah u soo qoray: “Haddii ay shinbiri adiga ama wax aad leedahay ku dul xaarto waxaa la sheegay in ay nasiib wanaagsan tahay, laakiin ka waran haddii ay daaqadaada jabiso? Miyay ku xisaabsan tahay sida ay laba nasiib tahay? @MoSalah”.
Qaar ka mid ah falcelintii taageerayaasha ee su’aasha Lovern:
Taageere ay ugu qoran tahay Mayada Ahmed ayaa soo qaatay sawirka hoose wuxuuna Dejan Lovern u sheegay waxa uu Salah ka yeeli doono arintan wuxuuna u soo qoray: ‘Salah adiga kuuma soo jawaabi doono-waan ka xumay Lovern” Sawirkan ayuuna u soo qaatay.
Taageere kale ayaa isna u soo qoray: “Waxay la micno tahay in aad gaadhi cusub helayso”.
Mid kale ayaa sheekada dhinac kale u rogay wuxuuna Lovern u soo qoray: “Miyay xaqiidii shinbirtu adiga ahayd Dejan Lovern-now? muxuu Mohamed Salah adiga kugu sameeyay? HAhaha”.
Taageere kale ayaa Lovern u soo qoray: “Lovern waxaad tahay saaxiib geesi ah waxaanu kugula raaxaysan doonaa twitterka, noo sheeg sida muraayada/daaqada loo jajabiyay”.
Taageere ay ka muuqato in uu reer Masar yahay ayaa ka shakiyay in Lovern uu leeyahay hida sida dalka Masar ah wuxuuna u soo qoray: “Waxaan ka shakiyay in aad asal u tahay Masar, waa hubaal in ay yihiin kalmadihii reer Masar”.
Taageere kale ayaa arintan uga faa’iidaystay in Lovern uu ka dalbado in uu ku salaamo Mohamed Salah wuxuuna u soo qoray: “Hi Dejan, fadlan aniga igu salaan Mohamed”.
Muuqaalo,sawiro iyo qoraalo aad u tiro badan oo ay in badan kaftan iyo waxyaabo kala duwan yihiin ayuu Lovern ku kasbaday qoraalkan uu Salah u diray waxaana dib loogu soo dhaweeyay barta twitterka.
Couldn’t get the window wipers on quick enough 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/VoFsE0kvXo
— Talk2Frank (@AshleyN43061891) May 20, 2020
Qaar taageerayaasha kala duwan ee kubbada cagta ah ayaa Lovern u soo qoray in aanu waligii isbadalayn halka kuwo kale ay u soo qoreen in uu twitterkiisa ku soo qorto in uu yahay difaaca dhexe ee Premier League ugu fiican.
Lovern iyo Mohamed Salah ayaa ka mid ahaa ciyaartoydii kooxda Liverpool ee maanta tababarka ku qataay Melwood waxaana Lovern la waydiiyay haddii ay maanta isku soo laabteen Salah oo ay saaxiib dhaw yihiin wuxuuna taageere ugu soo jawaabay in ayna wali haysan fursad ay iskugu soo dhawaan karaan.